Orinasa fandavahana fantsakana rano | Mpanamboatra Rig ary atsofohy rano China China
Ny rig fandavahana SNR300 dia karazana rig fandavahana rano feno multifunctional feno lavarangana feno rano ho an'ny fandavahana hatrany amin'ny 300m ary ampiasaina amin'ny fantsakana rano, fantsakana fanaraha-maso, injenieran'ny fantsom-panafanana hafanana avy any an-tany, lavaka fanapoahana, famonoana ary vatofantsika. tariby, antontam-bary sns sns Ny fahamafisana sy ny fahamendrehana no toetra mampiavaka ny rig izay natao hiasa amin'ny fomba fandavahana maro: ny fivezivezena amin'ny fotaka sy ny rivotra, ny fitrandrahana ny palatra, ny fivezivezena mahazatra. Izy io dia afaka mamaly ny fangatahana fandavahana amin'ny toe-piainana ara-jeolojika sy lavaka mitsivalana hafa.
Rig fandavahana rano amin'ny SNR400
Ny rig fandavahana SNR400 dia karazana rig fandavahana rano feno multifunctional feno lavarangana feno rano ho an'ny fandavahana hatramin'ny 400m ary ampiasaina amin'ny fantsakana rano, fantsakana fanaraha-maso, injenieran'ny fantsom-panafanana hafanana avy any an-tany, lavaka fanapoahana, famonoana ary vatofantsika. tariby, antontam-bary sns sns Ny fahamafisana sy ny fahamendrehana no toetra mampiavaka ny rig izay natao hiasa amin'ny fomba fandavahana maro: ny fivezivezena amin'ny fotaka sy ny rivotra, ny fitrandrahana ny palatra, ny fivezivezena mahazatra. Izy io dia afaka mamaly ny fangatahana fandavahana amin'ny toe-piainana ara-jeolojika sy lavaka mitsivalana hafa.
Rig fandavahana rano amin'ny SNR500
Ny rig fandavahana SNR500 dia karazana rig fandavahana rano feno multifunctional feno lavarangana feno rano ho an'ny fandavahana hatramin'ny 500m ary ampiasaina amin'ny fantsakana rano, fantsakana fanaraha-maso, injenieran'ny fantsom-panafanana hafanana avy any an-tany, lavaka fanapoahana, famonoana ary vatofantsika. tariby, antontam-bary sns sns Ny fahamafisana sy ny fahamendrehana no toetra mampiavaka ny rig izay natao hiasa amin'ny fomba fandavahana maro: ny fivezivezena amin'ny fotaka sy ny rivotra, ny fitrandrahana ny palatra, ny fivezivezena mahazatra. Izy io dia afaka mamaly ny fangatahana fandavahana amin'ny toe-piainana ara-jeolojika sy lavaka mitsivalana hafa.
Rig fandavahana rano amin'ny SNR600
Ny rig fandavahana SNR600 dia karazana rig fandavahana rano feno multifunctional feno lavarangana feno rano ho an'ny fandavahana hatramin'ny 600m ary ampiasaina amin'ny fantsakana rano, fantsakana fanaraha-maso, injenieran'ny fantsom-panafanana hafanana avy any an-tany, lavaka fanapoahana, famonoana ary vatofantsika. tariby, antontam-bary sns sns Ny fahamafisana sy ny fahamendrehana no toetra mampiavaka ny rig izay natao hiasa amin'ny fomba fandavahana maro: ny fivezivezena amin'ny fotaka sy ny rivotra, ny fitrandrahana ny palatra, ny fivezivezena mahazatra. Izy io dia afaka mamaly ny fangatahana fandavahana amin'ny toe-piainana ara-jeolojika sy lavaka mitsivalana hafa.
Rig fandavahana rano amin'ny SNR800
Ny rig fandavahana SNR800 dia karazana rig fandavahana rano feno multifunctional feno lavarangana feno rano ho an'ny fandavahana hatramin'ny 800m ary ampiasaina amin'ny fantsakana rano, fantsakana fanaraha-maso, injenieran'ny fantsom-panafanana hafanana avy any an-tany, lavaka fanapoahana, famonoana ary vatofantsika. tariby, antontam-bary sns sns Ny fahamafisana sy ny fahamendrehana no toetra mampiavaka ny rig izay natao hiasa amin'ny fomba fandavahana maro: ny fivezivezena amin'ny fotaka sy ny rivotra, ny fitrandrahana ny palatra, ny fivezivezena mahazatra. Izy io dia afaka mamaly ny fangatahana fandavahana amin'ny toe-piainana ara-jeolojika sy lavaka mitsivalana hafa.
SNR1000 Rig fandavahana rano
Ny rig fandavahana SNR1000 dia karazana rig fandavahana rano feno multifunctional feno rano ho an'ny fandavahana hatramin'ny 1200m ary ampiasaina amin'ny fantsakana rano, fantsakana fanaraha-maso, injenieran'ny heat-ground pumping heat-ground, loaka manapoaka, bolting ary vatofantsika tariby, antontam-bary sns sns Ny fahamafisana sy ny fahamendrehana no toetra mampiavaka ny rig izay natao hiasa amin'ny fomba fandavahana maro: ny fivezivezena amin'ny fotaka sy ny rivotra, ny fitrandrahana ny palatra, ny fivezivezena mahazatra. Izy io dia afaka mamaly ny fangatahana fandavahana amin'ny toe-piainana ara-jeolojika sy lavaka mitsivalana hafa.
Rig fandavahana rano amin'ny SNR1200
Ny rig fandavahana SNR1200 dia karazana rig fandavahana rano feno multifunctional feno rano ho an'ny fandavahana hatramin'ny 1200m ary ampiasaina amin'ny fantsakana rano, fantsakana fanaraha-maso, injenieran'ny rivotra mafana mifototra amin'ny tany, loharano mitsoka, lobolika ary vatofantsika. tariby, antontam-bary sns sns Ny fahamafisana sy ny fahamendrehana no toetra mampiavaka ny rig izay natao hiasa amin'ny fomba fandavahana maro: ny fivezivezena amin'ny fotaka sy ny rivotra, ny fitrandrahana ny palatra, ny fivezivezena mahazatra. Izy io dia afaka mamaly ny fangatahana fandavahana amin'ny toe-piainana ara-jeolojika sy lavaka mitsivalana hafa.
Rig fandavahana rano amin'ny SNR1600
Rig fandavahana SNR1600 dia karazana rig fandavahana rano multifunctional feno volo feno hidrily ho an'ny fandavahana hatramin'ny 1600m ary ampiasaina amin'ny fantsakana rano, fantsakana fanaraha-maso, injenieran'ny fantsom-panafanana hafanana avy any an-tany, lavaka fanapoahana, famonoana ary vatofantsika tariby, antontam-bary sns sns Ny fahamafisana sy ny fahamendrehana no toetra mampiavaka ny rig izay natao hiasa amin'ny fomba fandavahana maro: ny fivezivezena amin'ny fotaka sy ny rivotra, ny fitrandrahana ny palatra, ny fivezivezena mahazatra. Izy io dia afaka mamaly ny fangatahana fandavahana amin'ny toe-piainana ara-jeolojika sy lavaka mitsivalana hafa.
Izahay koa dia mamokatra fitaovana fandavahana rivotra sy fitaovana fandavahana paompy, ankoatry ny rig amin'ny fandavahana fantsakana amin'ny rano. Ny fitrandrahana ny rivotra dia teknika iray izay mampiasa rivotra voafintina fa tsy rano sy fotaka mivezivezy hampangatsiaka ireo potika fandavahana, hanala ireo fanapahana fandavahana ary hiarovana ny rindrina tsara. Rivotra tsy mety ritra sy fanomanana mora ny fangaro amin'ny rano-gasolika dia manamora ny fampiasana rigs fandavahana amin'ny toerana maina sy mangatsiaka ary mampihena ny vidin'ny rano.